Otú Ị Ga-esi Malite Ịgụ Baịbụl
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Batak (Dairi) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Chamí) English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Javanese Kabardin-Cherkess Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khakass Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mbunda Mexican Sign Language Mingrelian Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Pomeranian Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Vlax, Russia) Ronga Runyankore Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Olee ihe ị ga-eme ka ịgụ Baịbụl na-atọ gị ụtọ? Legodị ihe ise nyerela ụfọdụ ndị aka.
Nọrọ n’ebe ahụ́ ga-eru gị ala. Gbalịa nọrọ ebe dị jụụ. Gbaa mbọ ka a ghara inwe ihe ga na-adọpụ gị uche. Ịnọ ebe ị ga na-ahụ ihe ị na-agụ nke ọma, nakwa ebe ezigbo ikuku ga na-ekusa gị ga-eme ka ị na-aghọta ihe ị na-agụ.
Jiri obi ọcha gụọ ya. Ebe ọ bụ Nna anyị bi n’eluigwe nwe Baịbụl, ọ ga-abara gị uru ma i mee ka nwatakịrị chọrọ ịmụta ihe n’aka nne ma ọ bụ nna ya hụrụ ya n’anya. Ọ bụrụ na e nwere ihe na-adịghị mma ị na-eche gbasara Baịbụl, ọ ga-adị mma ka ị hapụ ya ka Chineke nwee ike ịkụziri gị ihe.—Abụ Ọma 25:4.
Kpee ekpere tupu gị agụwa Baịbụl. Ọ bụ uche Chineke ka e dere na Baịbụl. Ọ bụ ya mere anyị ji kwesị ịrịọ ya ka o nyere anyị aka ịghọta ya. Chineke kwuru na ọ ga-enye “ndị na-arịọ ya mmụọ nsọ.” (Luk 11:13) Mmụọ nsọ ga-enyere gị aka ịghọta uche Chineke. Nwayọọ nwayọọ, ọ ga-emekwa ka ị ghọta “ihe ndị miri emi nke Chineke.”—1 Ndị Kọrịnt 2:10.
Gụọ ya otú ị ga-aghọta ya. Agụla ya naanị ka ị gụchaa isi ole i kpebiri ịgụ otu mgbe. Chebara ihe ị na-agụ echiche. I nwere ike ịjụ onwe gị ajụjụ ndị dị ka: ‘Olee àgwà ọma onye a na-ekwu gbasara ya ebe a nwere? Olee otú m ga-esi na-eme ka ya?’
Nwee ihe i bu n’obi Baịbụl ị na-achọ ịgụ ga-enyere gị aka na ya. Ị chọọ ka Baịbụl ị na-achọ ịgụ na-atọ gị ụtọ, i kwesịrị ibu n’obi na ị ga-amụta ihe ga-abara gị ezigbo uru. I nwere ike ibu n’obi ịmụtakwu gbasara Chineke, ma ọ bụkwanụ otú ị ga-esi bụrụ ezigbo mmadụ, ezigbo di ma ọ bụ ezigbo nwunye. Gazie ebe Baịbụl kwuru ihe ndị ga-enyere gị aka ime ihe ndị a ị chọrọ ime, gụwa ha. *
Ime ihe ise a ga-eme ka ịgụ Baịbụl na-atọ gị ụtọ. Ma, olee otú ị ga-esi eme ka ọ na-atọkwu gị ụtọ? Isiokwu na-eso nke a ga-akọrọ gị ihe ụfọdụ ị ga-eme.
^ para. 8 Ọ bụrụ na ị maghị ebe e kwuru ihe ndị ahụ na Baịbụl, i nwere ike ịgwa Ndịàmà Jehova ka ha nyere gị aka.
OTÚ Ị GA-ESI NA-AGỤ BAỊBỤL YA ANA-ATỌ GỊ ỤTỌ
Agụla ya ọkụ ọkụ
Mee ka obi gị dịrị n’ihe ị na-agụ, na-ewere ya ka ị̀ nọ mgbe ihe ndị ahụ na-eme
Lee ma ị̀ ga-ahụ otú amaokwu ndị ị na-agụ si gbasa ihe amaokwu ndị ọzọ na-ekwu
Chọpụta ihe ebe ị gụrụ na-akụziri gị
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Otú M Ga-esi Malite Ịgụ Baịbụl?